Onwe ya dị mkpa akara - | Enweghị opekempe | AromaEasy
onwe labelụ mkpa mmanụ
Ka anyi bido
Private labelụ mkpa mmanụ Anyị dị njikere na-labelụ mkpa mmanụ emewo ka ọ dịrị ya mfe karịa mgbe ọ bụla na-amalite gị mkpa mmanụ ngwaahịa akara. Onye ọ bụla n'ime mmanụ ndị a na-abịa tupu ejupụta na karama amba mara mma na okpu mkpuchi ụmụaka nke Europe. Kalama ọ bụla jupụtara na 10ml na mmanụ dị mkpa anyị. Nke a na - enye gị ohere ịme ngwa ngwa rụọ ọrụ nke ọma na mmanụ gị nke ọma na akara gị na-enweghị nsogbu gbasara njuju na-adịghị mma. Kalama ọ bụla na-abịa ogbe ndị dị njikere maka akara.
Cheedị ụdị akara gị na akara gị kacha mma kachasị mkpa mmanụ, ngwakọta aromatherapy, mmanụ ịhịa aka n'ahụ, lotions na ngwaahịa aromatherapy na mbelata 50% ma ọ bụ karịa na ọnụahịa mkpọsa.
Ndị ọzọ Nwepu aha ndi mmadu (aka White Label mmanụ):
AromaEasy na-enye ihe eji eji mmanu di nkpa mee ihe site na iji ihe kachasi nma na nke oma. Imirikiti ndị ahịa anyị dị mkpa dị mkpa ndị ahịa mmanụ dị na US, mana mbupu zuru ụwa ọnụ dị. Anyị na-ebufe ọnọdụ gị ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ mbupu.
Etu esi eji aha njirimara dị mkpa na-arụ ọrụ
Anyị na-emezi karama, okpu, akara ma tinye usoro gị wee zigara gị ya ma ọ bụ ebe ị họọrọ.
Enweghị usoro iwu kachasị mkpa, AromaEasy bụ otu n'ime ihe nkesa dị oke mkpa nke ndị na-achọghị iwu kacha nta. Ọbụlagodi na ị bụ onye ọchụnta ego azụmaahịa ma ọ bụ onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na-ewepụta azụmaahịa gị, anyị nwere obi ụtọ ịnye ndụmọdụ nzuzo nke ahaziri iji nyere gị aka ịmalite. Nwere ike ịdabere na enyemaka anyị iji chọpụta nke mmanụ ma ọ bụ ngwakọta dị mkpa ga-akacha egbo mkpa nke ndị ahịa gị.
Private labelụ mkpa mmanụ
onwe labelụ mkpa mmanụ dịghị nke kacha nta
Nchịkọta Mmanụ Dị Mkpa, Ngwakọta Aromatherapy na Mmanụ ịhịa aka dị maka ndebanye aha nkeonwe 50% ego *
Nke a gụnyere: Mmanụ dị mkpa, Ngwakọta mmanụ dị mkpa, mmanụ ịhịa aka n'ahụ, na ọbụnadị ngwakọta Omenala na Ngwaahịa gị.
Ngwakọta na Ngwaahịa Ahịa - Ndị ọkachamara anyị nwere ike ịmepụta ngwakọta aromatherapy ma ọ bụ mmanụ ịhịa aka n'ahụ na usoro ahọrọ nke ịhọrọ ma ọ bụ ịnwere ike iji otu n'ime usoro anyị dị ugbu a. Anyị na-anabata mmekorita. Ọ bụrụ n ’ị ga - eche n’echiche, anyị nwere ike iji aka anyị kee ya maka ya site n’itule na nhụhụhụhụ ụzọ ọhụụ bụ ihe okike, gbadoro ụkwụ na osisi, chebe ya, ọfụma ya, ma ọ bụ na - enweghị ihe ọ bụla. Ọzọkwa, nhazi niile, ịkọ ọkpọ, ịkọ aha, na mbupu na-eme na ụlọ ahịa anyị. Anyị na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke iji ihe ndị na-abụghị sịntetik.
onwe labelụ organic mkpa mmanụ usa
Ọzọ Label Products:
Mkpa Mmanụ Mpụ Mkpa
Ọzọ Aromatherapy ngwaahịa
N'ihi ngwaahịa anyị dị mma na ụkpụrụ ịtọ ụtọ nke ụkpụrụ, anyị na-enye naanị ndị ka elu Mmanụ dị mkpa. N'ihi nke a, anyị nwere ike ghara ịbụ ndị dị ọnụ ala karịa, mana anyị bụ ndị abụọ na nke abụọ n'àgwà; na-enye gị ntụkwasị obi kachasị na ngwaahịa ị na-enye ndị ahịa gị.
onwe labelụ mkpa mmanụ California
Ogo mmanụ mmanụ mbụ
Anyị nwere mmasị n'ịdị mma, ọ bụghị ọnụahịa. Mmanụ ndị dị mkpa dị ọnụ ala na-adịkarị mma ma na-agwakọta ma ọ bụ na-agwakọta ya na mmanụ sịntetik ma ọ bụ ihe na-esi isi, mgbe ụfọdụ na-eme ihe ọjọọ karịa ezi. Anyị onwe anyị na-ahọrọ mmanụ ọ bụla dị mkpa site na ngwaahịa anyị karịrị mmanụ dị mkpa 150 iji hụ na anyị nyere ndị ahịa anyị naanị mma kacha mma. Ma, n'otu oge ahụ, anyị na-anwa idebe ọnụahịa anyị dị ka nke ọma dị ka o kwere mee ma na-edebe ụkpụrụ kachasị elu. Maka akara nzuzo nke mmanụ dị mkpa, ọnụahịa gị ga-abụ ihe dịka ọkara (50%) nke ọnụahịa mkpọsa anyị na ọtụtụ maka nnukwu iwu.
onwe labelụ ụgbọelu mmanụ
Otu mmanụ Anyị Na-eji
Bottleskpụrụ anyị maka ọkwa nke onwe anyị nke mmanụ dị mkpa gụnyere:
Karama Mkpa Mmanụ: Amber Glass - 5ml, 10ml, 15ml, na 1oz
Hịa aka n'ahụ mmanụ - Amba Plastic na-anaghị arụ ọrụ - 4 oz na 8 oz
Ekpere ndị ọzọ, karama ịgba, na karama tụgharịkwara dị maka ngwaahịa "dị njikere iji" dị ka mmanụ ịhịa aka n'ahụ.
All 5ml ka 1oz essential karama mmanụ na-agụnye blackcaps (European dropper, 5-30ml tamper proof)
Nha ndị ọzọ dị
Enwere ụzọ 3 iji mee nke a:
Chepụta akara nke gị, bipụta ha ma zitere anyị ya. Anyị ga-etinye aha ndị ahụ na karama na ntinye ego 200 USD.
Chepụta akara nke gị, zitere anyị atụmatụ gị, anyị ga-ebipụta aha na tinye ha na karama ahụ, ọzọ, na ntinye ego 200 USD
Anyị na-enyere gị aka ịmepụta ma bipụta aha gị.
Y’oburu n’inweghi udi nkpuru ahihia, anyi gha emebe akara gi maka ego echichi otu oge. Anyị na-amalite site na otu usoro dịka akara nke anyị site na iji akara ngosi gị na ụcha agba / usoro gị.
Enwere ego ntọala otu oge nke 200 USD maka imepụta akara, dabere na nha usoro gị. Enweghị ụgwọ iji bipụta mgbe otu mbido mbido otu oge.
Anyị kpọọ na-e biri ebi na elu gloss mmanụ na mmiri àmà akwụkwọ.
Ọkọlọtọ akara anyị bụ 30mm x 76mm (1.18 "x 3"). Nke a na-arụ ọrụ nke ọma maka 10ml na karama buru ibu.
Ọkachamara akaụntụ gị ga-ezitere gị ụkpụrụ nduzi maka ịmepụta aha gị. Anyị ga-eduzi gị na usoro ahụ dum!
Mkpa onwe labelụ mmanụ
Ngwakọta Ngwakọta Mkpa
Anyị na-agba mmanụ dị mkpa ma ọ bụ mmanụ dị mkpa "dị njikere iji" nke etinyere ka ọ bụrụ nke kwesịrị. Nwere ike ịhọrọ ngwakọta site na katalọgụ aha anyị nke aha ma weghachite ha iji kwado akara gị. Anyị nwekwara ike ịme ngwakọta site na iji usoro ha, ọ bụrụhaala na ha ga-agbaso ụkpụrụ nchekwa anyị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka anyị mepụta usoro ịgwakọta, onye nyocha anyị, Dr. John Paul, Onye isi ụlọ akwụkwọ Highlands School of Natural Healing, nwere ike soro gị rụọ ọrụ iji mepụta ngwakọ ngwakọ gị na mgbakwunye ọnụ.
onwe labelụ dị ọcha mkpa mmanụ
Kedu oge m ga-enweta mmanụ m?
Ọ dabere n'otú ị ga-esi kwadebe ọrụ ahụ. Dịka, ọ na-ewe ihe dị ka otu izu iji mepụta akara ma mezue iwu gị, otu izu maka ịkọ mmiri, na otu izu maka mbupu. Ọ bụrụ na ego mmanụ adịghị, chere izu ọzọ ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na iwu gị ka ibu (ihe 1,000 ma ọ bụ karịa), biko kwe ka otu izu abụọ karịa. Enwere ike mezue iwu ọhụrụ n'ime ụbọchị 3 ruo 5. Anyị na-enyekwa akara njiri mara dị mkpa na Australia na akara onwe onye dị mkpa na Canada, yana Japan na mba ndị ọzọ.
Biko gwaa onye okacha mara banyere ulo oru anyi ka anyi hazie ihe nlele ndi ahu ozugbo i mechara udiri ma nye anyi ihe omuma banyere ihe ndi choro.
mkpa mmanụ emepụta usa
Ahịa / Katalọgụ
Onwe aha njirimara dị 50% ala karịa mkpọsa maka ọtụtụ ihe. Mbelata ego maka mmanụ dị mkpa dị oke ọnụ, ngwa na ihe mgbasa bụ 30%, ebe oke anyị pere ezigbo mpe na ihe ndị a. Ọzọ ego dị maka nnukwu iwu.
Ahịa aha nke onwe ya gụnyere mmanụ, karama, okpu, na akara. Enweghị ego zoro ezo ebe a. Ọnụego mbupu anyị bụ ọnụ ahịa ebugharị maka mbupu, na-enweghị ụgwọ njikwa ma ọ bụ ụgwọ “mma”.
Anyị na-agbakọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Enwere ike itinye ụgwọ ọzọ maka itinye karama onye ọ bụla na akpa, igbe, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ibute gị, ụlọ ahịa gị, Amazon, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ. All mbupu ụgwọ ndị ọzọ. Anyị na-akwụ ụgwọ kpọmkwem ihe ndị na-eweta mbupu na-akwụ anyị ụgwọ, na-enweghị njikwa ma ọ bụ ụgwọ dị mma.
Anyị na-enye ezigbo mma AromaEasy mmanụ dị mkpa na ọnụ ahịa ahịa ahịa. ị nwere ike iji uru nke mbupu ngwa ngwa anyị. Anyị na-ahụ na ndị ahịa gị natara iwu ha n'ime ụbọchị 5-7 n'ebe ọ bụla na United States. Anyị na-enyekwa ndị otu anyị ebubata ìsì, data ihe ndekọ nke oge a, yana onyonyo dị elu.
AromaEasy na-emepụta mmanụ dị ezigbo mkpa 100% nke ndị ahịa gị ga-ahụ n'anya. Mụta ihe banyere dobe mbupu ma ọ bụ sonyere anyị ma ọ bụrụ na ị dị njikere izugbe AromaEasy mmanụ ndị dị mkpa
Offọdụ ndị ahịa anyị na-ere ngwaahịa anyị mepụtara maka ha na Amazon. Ma, nke a siri ike ịme UNLESS, ị na-ererịrị ngwaahịa ndị ọzọ na Amazon. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ire mmanụ dị mkpa na Amazon, biko kpọtụrụ ndị na Amazon FIRST ma gbaa mbọ hụ na ị nwere ike ree ngwaahịa gị na Amazon ma chọpụtakwa ihe niile ị chọrọ iji zitere anyị dị ka akara aha pụrụ iche, akara ngosi, pụrụ iche chọrọ nkwakọ ngwaahịa, wdg Anyị ga-eziga Amazon naanị ma ọ bụrụ na i tinyela akaụntụ ma mara ihe ị chọrọ. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-ezitere gị ya.
Iji malite, dejupụta kọntaktị ụdị n'okpuru. With ga-enweta ozi-e nwere obere ajụjụ. Biko dejupụta ozi niile ị nwere ike zitere anyị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị maka iwu gị, ọ na-enyere anyị aka inweta echiche nke ọrụ gị.
Ka anyị malite